कसरी विदेशी पैसामा गाउँ घरतिर धर्मान्तरण गरिँदैछ : अभयदास महाराज - Sikkim News | Sikkim Breaking News | Trending News
Home/Trending/Latest News/कसरी विदेशी पैसामा गाउँ घरतिर धर्मान्तरण गरिँदैछ : अभयदास महाराज
कसरी विदेशी पैसामा गाउँ घरतिर धर्मान्तरण गरिँदैछ : अभयदास महाराज
मैले सिक्किम राज्यको दक्षिण जिल्लामा पर्ने तिमी नाम्फिङ स्थित प्रणामी मन्दिरको गृहकक्षमा सिक्किम सनातन हिन्दु बौध्द भक्त-जनहरुको समावेशलाई सम्बोधन गरेको थिए। मेरो साथै सिक्किमका प्रबुध्द नागिरक र सिक्किम सरकारका पूर्व मन्त्री श्री छिटेन टासी भोटीयाको सम्बोधनलाई लिएर सिक्किम राज्यमा घृणा र बैमनश्यको वातावरण सृजना गर्ने कोशिस विदेशीका हातमा खेल्ने, विदेशीहरु द्वारा फन्डिङ र सन्चालित मान्छेहरु द्वारा गरिन्दैछ। ज्ञात रहोस मैले त्यो सम्बोधनमा कुनै व्यक्ति विशेषको नाम लिएको थिईन्। मैले केवल सिक्किम जस्तो सानो संवेदनशील राज्यमा जो केहि दशक अघिसम्म भारतको वफर स्वतन्त्र राष्ट्र थियो त्यो भारतमा एउटा शर्तसित समावेश गरिएको कुरालाई मात्र समझ्ना गराउने कोशिस गरेको थिए। सिक्किम भारतमा विलय हुनु भन्दा अघि सनातनि बौध धर्मराजा द्वारा शासित राज्य थियो । भारत सरकारले सिक्किमको चौतर्फी सुरक्षाको प्रतिश्रुति दिएर सिक्किमलाई आफ्नो 22वौं अङ्ग बनाएको थियो। यो सुरुक्षाको प्रतिश्रुतिमा सिक्किमेहरुको भौगोलिक, राजनैतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, पौराणिक र पारम्परिक सुरक्षा समावेश थियो। यहि सुरक्षाको प्रतिश्रुतिलाई ग्यारेन्टी दिन ,भारत सरकारले भारतको संविधानको संसोधन गरेर सिक्किमको निम्ति 371 एफको विशेष प्रावधान समावेश गरेको हो। यहि 371 एफले सिक्किमको पौराणिक सनातन र बौद्ध धर्मको सुरक्षा खातिर संघ सीटको आरक्षण दिएको हो। “त्यो विशेष प्रावधानले सुरक्षित सिक्किममा लोभ लालच प्रलोभन र डलरको भरमा सामाजिक र धार्मिक असन्तुलन सृजना गर्नेहरुको क्रियाकलापको विरोधमा प्रतिक्रिया मात्र हो मेरो सम्बोधन”। मैले यहि भनेको थिएँ सिक्किम भारतमा विलय हुँदा नगन्य रहेको एउटा धार्मिक सम्प्रदाय कसरी चार दशकको छोटो समयमा यसरी फैलियो ? उनिहरुले सिक्किमका सोझा हिन्दु र बौद्ध धर्मावलम्बीहरुको धार्मिक सहिष्णुताको फायदा उठाएर धर्मको व्यापार गरेका छन् । मेरोमा त्यसको प्रसस्त सबुतहरु छन् । कसरी सिक्किममा विदेशी डलर र विचारको खेती हुंदैछ । कसरी विदेशी पैसामा गाँउ घरतिर धर्मान्तरण गरिन्दैछ । कसरी हाट बजारतिर धर्मको हाट लगाईन्दैछ र सिक्किमको धार्मिक र सामाजिक सन्तुलन खराब गरिन्दैछ। कसरी सरकारमा बसेको मानिसहरुले यो भारतीय संस्कृति विरोधी गतिविधिलाई संरक्षण दिंदैछ ? सनातनी विरोधीहरुले याद राख्नु , कानुन र पुलिस एकतर्फ मात्र तर्ने पुल होइन ; यो दुइतिर जान्छ। आजसम्म एकातिर मात्र गयो अब अर्कोतिर पनि जान्छ। जब खोजी हुन्छ तब सबै सत्य बाहिर निस्कनेछ। तब यिनीहरुले नै भन्नेछन् सरकार धर्म विरोधी भयो। भारत सरकारले दिएको सुरक्षाको प्रतिश्रुतिको विपरति जब सिक्किमे बौद्ध र हिन्दु सनातनी धर्मावलम्बीहरुले आफुलाई असुरक्षित महसुस गरे , मैले एकपल्ट बुझ्ने विचार गरे।मेरो चार बर्षको सिक्किम व्यापी बुझाईलाई र सिक्किमे बुद्धमार्गी अनि हिन्दुहरुको चिन्ताको समीक्षा गर्दा भारत विरोधी , राष्ट्रविरोधी , सिक्किम विरोधी शक्तिहरु लामबद्ध भएर म माथि खनिन्दैछन् । के सिक्किमे सनातनी हिन्दु र बौद्धहरुले आफ्नो असुरक्षाको गुनासो पनि गर्न पाउदैन्न ? के उनिहरुले आफ्नो अस्तित्वको चिन्ता पनि जताउन सक्दैनन ? चार दशकमै उनिहरु यति कम्जोर भए। भए त किन भए ? अब जांच जरुरी छ। हाम्रो भारत सरकार र सिक्किम सरकारलाई आग्रह छ उनिहरुको क्रियाकलापलाई प्रशासनको नजरमा राखियोस। भारतीय संस्कृति र धर्म विरोधी शक्तिहरु कसरी सन्चालित गरिन्दैन्छन् त्यसको एक-दुईवटा नमुना पेश गरेर सिक्किम सरकार र भारत सरकारसित कारवाहीको माग म यो विज्ञप्ति मार्फत गर्दैछु। त्यो पछि अरु कुरा हुनेछ भविष्यमा।
धर्मो रक्षति रक्षते।